Xiisadda Cakiran Ee U Dhaxaysa Carabta Iyo Iran, Saamaynta Ay Dunida Ku Yeelatay Iyo Falcelinta Madaxda Caalamka - Jigjiga Online
Xiisadda Cakiran Ee U Dhaxaysa Carabta Iyo Iran, Saamaynta Ay Dunida Ku Yeelatay Iyo Falcelinta Madaxda Caalamka
Dunida waa ay daawanaysaa iyadoo walaac ka xooggan ka qabto xassaradda cirka isku sii shareereyso ee u dhaxeeysa Marekanka iyo Iran, ka dib markii ay dhaceen weerarradii lagu bartilmaameedaday laba markab oo marayay gacanka Cumaan toddobaadkii la soo dhaafay.
Pentagon-ka Mareykanka ayaa daaha ka qaaday sawirro cusub oo muujinaya dhacdadaasi, waxa ayna ku doodayaan in aysan marnaba ka laba labaynin in ay hayaan cadayn ah in Iran ay ka dambeysay weeraradaasi, inkastoo Iran ay iska fogeeysay in ay ku lug lahayd weerkii maraakibta ee gacanka Cumaan.
Iyadoo ay xaaladda labadaan dal ay sii xumaanayso ayuu aqalka cad ku dhawaaqay in ciidamo dheeraad ah ay bariga dhexe geeyeen.
Sidee ayay dawladaha caalamka uga falceliyeen xasaraddan cirka isku sii shareeraysa.
Mdaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegeya in weerarka lagu qaaday labada maraakiib toddobaadkii la soo dhaafay ay gebi ahaanba ka dambeysay Iran.
Isniintina Pentagon-ka ayaa shaaca ka qaaday sawirro cusub oo muujinaya dhacdadaasi, waxa ayna ku doodayaan in Iran ay ka dambeysay weeraradaasi.
Kadib markii shaaca laga qaaday sawiradan, sii hayaha Wasiirka Difaaca ee Mareykanka Patrick Shanahan ayaa sheegay in 1,000 askari oo dhewerad ah la geeyay Bariga Dhexe, iyadoo horayna u sii joogeen 1,500 kuwaasi oo bishii la soo dhaafay halkaasi loo diray.
Sida Iran ay uga Falelisay
Iran ayaanan wax falcelin ah ka bixinin weerkii ugu dambeeyay balse waxa ay iska fogeysay in ay ku lug lahayd dhacdadaasi, waxa ayna eedeynata Mareykanka ku tilmaantay mid aan meelna ku salaysnayn.
Britain ayaa ku biirtay Mareykanka iyadoo Iran ku eedeysay weerarrada maraakiibta, balse Wasiirka Arrimaha Dibedda ee UK Jeremy Hunt ayaa labada dhinac ku booriyay in “xaaladda dejiyaan”.
Dhawr wasiir dibadeed oo ka socda Midawga Yurub ayaa Isniintii taageray hadalkii Xoghayaha Qaramada Midoobay ee ahaa la sameeyo baaritaano madax-banaan oo ku aaddan dhacdada.
Ruushka ayaa Mareykanka ugu baaqay in uu joojiyo waxa uu ugu yeeray “qorshihiisa xaaladda sii hurinaya” kaasi oo uu ciidamo dheeraad ugu dirayo Bariga Dhexe, taasi oo sare u sii qaadayso khatarta ah in Iran iyo Mareykanka uu dagaal fool-ka-fool ah dhex maro.
Shiinaha ayaa Iran iyo Mareykanka ugu baaqay in gacanka ay ka muujiyaan deganaan, waxa uuna ka digay in looga sii daro xaaladda gobolka.
Wasiirka arrimaha dibedda Wang Yi, ayaa weriyeyaasha u sheegay ” Waxaan dhammaan dhinacyada is haya ugu baaqeynaa in ay is dejiyaan oo aysan sameeynin ficillo xaaladda sii murjinaya.”
”Gaar ahaan Mareykanka waa in uu joojiyaa cadaadiska xad-dhaafka, taasi oo aan xasaradda haatan aloosan uga soo reynaynin.”
Dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Mohammed bin Salman ayaa beesha caalamka ugu baaqay in ay hal dhinac ka istaagaan weerarrada balse boqortooyada ayaa sheegtay in aysan marnaba doonayn in gobolka uu digaal ka qarxo.
Previous Kenya Oo Diyaarisay Qorshe Ay Dhabarka Kaga Jabinayso Somalia
Next Wargeyska The Independent: Maxamed Morsi ‘waa la dilay’
Ilmada Yaxaaska: Mustafe Wajiyo Badanaa!!!
Maraykanka oo doonaya inuu Al-Shabaab kula dagaallamo Waqooyi-Bari Kenya
DEG-DEG: Lataliyihii Arimaha Sharciyada iyo Xaquuqul Iinsaanka Madaxweyne Mustafe Oo Is Casilay & Xaqiiqooyinka Murugada Leh Ee Uu Shaaciyey
Fal-celinta wargeysyada Carabta ee sawir gacmeedkii laga sameeyay Nebi Maxamed (NNKH)
Iran oo dhaafisay Yuraaniyamkeeda ‘toban jeer’ iyo dheeraad intii loo ogolaa
Cumar al-Mukhtaar: Libaaxii Saxaraha ee guumeystaha iska caabbiyey
#Raaso Massacre is #Mustafa’s own doing
Labadii saacadood ee uu ku badbaaday hogaamiyihi mucaaradka Ruushka
Laba arrimood oo ku saabsan sida kacbada loo dhaqo
Dhiigga Ku Daadanaya RAASO
Mustafe Cagjar Oo Qorshaynaya Xasuuq Kale Oo Uu Ka Geysto Raaso
Killing of Muslim imams by government security forces is causing anger in Ethiopia
Reflection: 2nd Anniversary of deputy President Mustafa Muhumed Omer of Somali Region